Carrefour က အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » Carrefour က အကြောင်း
Carrefour က အကြောင်း
Posted by zoxnet on Apr 27, 2010 in Drama, Essays.. |2comments
ကျနော်လည်းမန်လေးမှ ဒီလိုမကြာခဏ ကြုံရဘူးပါတယ်။
သူငယ်ချင်းရဲ. ကြေးအိုးဆိုင်မှာ ခဏရောက်တုံး
အနောက်နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကမုန်.စားဘို.ဆိုင်ထဲကို ၀င်လာတာပါတယ်။
ဘိုလိုသွားပြောတာ ဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်လဲ ” နောင်တော် မြန်မာလိုပြောရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ”တဲ.ပါဗျာ။
တစ်ခါကတော.လုပ်ငန်းအတွက်ရောက်လာတဲ.တရုပ်ကုန်သည်တွေကို ဘိုလိုတ၀က် မတောက်တခေါက်တတ်တဲ. တရုပ်စကားတစ်ဝက်နဲ.
သွားပြီး ဘာသာတွေပြန်နေတာကို တရုပ်ကုန်သည်တစ်ဦးက ကျွန်တော်ကို ပြောလိုက်တာက
” အကိုရေ ဗမာလိုပြောတာ ပိုအားရမယ်ထင်ပါတယ်”တဲ.ခင်ဗျား။
ညီလေးတို.ရေ အပြောမတော် တစ်လှမ်းဆိုတဲ.စကားအလကားထားတာမဟုတ်ဘူးနော် ။
အ ဟား ဟား။ အစ်ကိုလည်း ကျွန်တော့်လို ကြုံခဲ့ရတာကို။ ဟုတ်ပ။ ဆဲ ပဲ ဆဲ သွားလို့။ နို့မို့ရင်တော့လား။